चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव भन्छन्– चीनसँगको सम्बन्धमा रिस्क छैन
Wednesday, 18 Apr, 2018 3:15 PM
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको साताब्यापी भ्रमणका लागि बेइजिङमा छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका रुपमा समेत लिइएको छ । भविश्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुने पनि चर्चा भइरहेको छ । निकट भविश्यमा हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धले नेपालको विकासमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव डा. उपेन्द्र गौतमसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण तयारी हँुदैछ । त्यसैको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री चीन जानुभएको छ । विदेश सम्बन्धबारे जानकार तपाईं प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म हामी जुन सरकार आए पनि अर्को देशको एजेण्डा नमान्दा सरकार नै ढल्ने र हाम्रा सबै निर्णयको स्थायित्व अर्को देशको हातमा दिएर उभिएका थियौं । यहाँका सरकारले आफ्नो देशको इन्ट्रेष्टमा काम गर्ने वित्तिकै सरकार ढल्ने र उसको इसरामा चल्ने अर्काे सरकार बन्ने अवस्था थियो । आफ्नै देशको एजेण्डामा काम गर्नु पनि सिसाको घरमा बसेर अरुलाई ढुंगा हान्नु जस्तै जोखिम थियो । तर केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले त्यसलाई तोडेर अहिले बेग्लै अवस्थामा ल्याएको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला ओलीले लिएको अडान तथा देश र जनता प्रति देखाएको बफादारिताले अब हामीलाई हाम्रा देशको निर्णय आफैं गर्न सक्ने बनाएको छ । हाम्रो स्वाभिमान फिर्ता पाएको यो अवस्था अहिलेसम्मकै उच्च सफलता हो, जुन ओलीले ल्याएका हुन् । देशको शीर उठाउँदै ओलीले हाम्रो स्वाभिमान फिर्ता ल्याएकै कारण जनताको मत पनि उनले पाए ।
अहिले ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहंदा हामीले मात्र होइन विश्वले पनि नजिकबाट हेरिरहेको छ । नेपालमा भएको राजनैतिक स्थिरता र त्यसमाथि अन्य शक्तिले खेल्न नपाउने कुरा हामी नेपालीका लागि राम्रो कुरा हो अरुका लागि होइन । त्यसैले पनि उनीहरुको नजर हामीमाथि छ । यो कुरा ओलीले राम्ररी बुझेका छन् । हामीलाई के लाग्छ भने ओलीको चीन भ्रमणले देशको भूराजनीतिक उचाई बढाउन अझै मदत पुग्नेछ ।
चीनसँगको सम्बन्ध भर्खर पारवहन सन्धीपछि निकट भएको छ, चीनका पनि नेपालसँग स्वार्थ होलान् नि ? विकासमा सहयोगका नाममा उसका पनि अमुक इच्छा होलन् नि ?
कसरी तपाईं चीनसँगको सम्बन्ध भर्खरैको हो भन्नुहुन्छ ? चीनसँग त हाम्रो स्रंङचङ गम्पोको पाला देखि २००० वर्ष पुरानो नाता छ । बरु भारत स्वतन्त्र भए देखिको सय दुई सय वर्ष पुरानो मात्र सम्बन्ध हो । तर चीन कहिल्यै हामीमा थोपरिन आएन । त्यहि भारत भने हरतरहमा हाम्रा योजना देखि हाम्रो राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न पछि परेन । हामीमा भएका तथ्य प्रमाणका आधारमा भन्न सकिन्छ कि चीन सँग जति पनि खुलेर हाम्रो योजनाका कुरा गरे हुन्छ, जुन देश र जनताका हितमा हुन् । नेपालको स्थिरतामा चीन आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्छ र स्थिरताका लागि यहाँ विकास हुनुपर्छ भन्ने उ ठान्छ । यदि यसलाई चीनको स्वार्थ भन्ने हो भने यसले हामीलाई के बेफाइदा छ भन्नुस् त । हामीले आफ्नो देशको हित हेर्ने हो, अरुको स्वार्थ होइन ।
त्यसोभए अहिलेसम्म छिमेकी देशसँग भएका सम्झौता देश र जनताको पक्षमा थिएनन् भन्न खोन्नुभएको हो ?
हो नि । जे हाम्रा पक्षमा थिए, ती तीस पचास बर्षसम्म कार्यान्वयन नै भएनन् । हामीसँग त्यस्ता अनेकौं अयोजनाहरु प्रमाणका रुपमा छन् । ती सम्झौता हाम्रो देश र जनतालाई नाघेर गरिए, हाम्रो स्वाभिमान बेचेर गरियो । जे बने उनीहरुका लागि फाइदा हुने मात्र बने । अरु आयोजनाहरु ओगट्ने मात्र काम भए ।
तर, अहिले ओलीले छिमेकी सम्बन्धमा स्थापित गरेको कुरा के हो भने हाम्रा निर्णय हामी आफैं गर्छाैं, हाम्रो राजनीतिक मामिलामा तिमी चासो नराख, हाम्रो हित हुनेगरी हामी मित्रता गर्छाैं । अर्काे कुरा दुई छिमेकी देशको अहितमा हामी प्रयोग हुँदैनौं, दुवैलाई समान दूरीमा रहेर हेर्न सक्ने भएका छौं, यो ओलीको देन हो । भारतमा जाँदा पहिले सम्झौता भएका नेपालको हितमा रहेका योजना कार्यान्वयन नभएको विषय ओलीले उठाए । यो ठीक छ ।
अब चीन भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट चाहिँ कस्ता कुरा एजेण्डा बन्लान् या बनाउनु पर्ला ?
ती एजेण्डा सबै स्पष्ट छन् । चीन हाम्रोमा स्थिरता र विकास चाहन्छ । चीनले हाम्रो स्वाभिमानको सधैं सम्मान गरेको छ । उसले हाम्रो राजनैतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । अब यहाँ पनि ओलीले बनाएको यो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लागू गर्दै चीनसँग विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ । यसअघि नै ओलीले रेल र सडक सञ्जालले दुई देशलाई जोड्ने र पारवहन अधिकार लिने सम्झौता गरेका थिए । अब त्यो काम ब्यवहारमा पूरा गराउन यो भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिले परराष्ट्रमन्त्री चीन जानु भएको छ । उहाँको प्रयास के कस्तो हुनुपर्छ ?
एउटा कुरा अरुको भन्दा चीनको फरक छ । भारतसँग जाँदा सरकारसम्म पुग्ने अनेक बाटा छन्, अनेक एजेन्ट छन् । ती सबैका फरक फरक मनोदशा र स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन् । तर चीनको एउटै मात्र च्यानल छ । ढिलो होला तर जुन सोझै माथि पुग्छ । बीचमा कसैको हात हुन्न । यसले पनि हामी चीन सरकारसँग सिधा सम्पर्कमा हुन्छौं । अहिले हामीले निक्कै कर्मठ ब्यक्तित्वलाई परराष्ट्रमन्त्री पाएका छौं, उनले यिनै संयन्त्रमा काम गर्नेछन् जस्तो लाग्छ ।
नेपालले अर्थिक विकासका कुरालाई अघि बढाउनुपर्छ त भन्नुभयो, त्यो के के हो टु दि पइन्टमा भनिदिनुस् न ?
हामीले आफूलाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भनिरह्यौं तर भारत वेष्ठित भइरहैं । अब यो अवस्था तोडिएको छ । अब साँच्चै हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका छौं । अब यसको विकासको लागि काम गरौं, अरु झिनामसिना कुरा नगरौं । हामीलाई चाहिएको बाटो, रेल, सिंचाई, हाइड्रो यस्तै त हुन् । जुन सानो लगानीले हुँदैन, त्यसमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।
यस्तो सहयोग गर्छ त चीनले ?
लामो समय भारतले लिएर पनि आयोजनाहरु पूरा नगरेका कारण तपाईंमा यस्तो निराशा पलाएको हो । तर चीन विश्वमा उदाएको शक्तिराष्ट्र हो । अब उसले गर्ने काम भनेको देश देशलाई उसको साथमा जोड्नु हो । हामी भौगोलिक हिसावले उसैको नजिक रहेको राष्ट्र यसको फाइदा अहिले उठाउन सकेनौं भने कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैनौं ।
के चीनसँगको सम्बन्धमा चाहिँ कुनै रिस्क देख्नुहुन्न ?
हो तपाईंले सहि कुरा गर्नु भो । चीन पनि भारत जस्तै एउटा छिमेकी देश हो । तर, कोसँग कस्तो दूरी या निकटता राख्ने त्यो हाम्रो अवस्थाले निर्देशित गर्छ । चीनसँग मात्र हैन देश र जनतालाई अघि राखेर काम गर्ने निर्णय गर्ने, र त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने काम हमाीले गर्नुपर्छ । आफ्ना निजी स्वार्थमा देशका एजेण्डा नविकाउने हो भने कहिँ कतै रिस्क हुँदैन । पहिलो त देशको एजेण्डा र जनताको आत्माबल माथि हुनुपर्छ, अनि कुनै देशले हेप्न सक्दैन । यसो गरेपछि न अन्य देशका एजेण्डाको भारी बोकेर नै हिंड्नु पर्छ, त्यस्तो केहि गर्नु पर्दैन । जनता र देशप्रति इमान्दारलाई कसैले केहि गर्न सक्दैन ।
देश केमा दुख्छ भन्ने कुरा हामीले ओलीलाई सिकाउनु पर्दैन । तर आफ्नो देशको पक्षमा काम गर्दा भारत वा चीनले के भन्लान् भन्ने कुरा सोच्नु पर्दैन । हामीलाई के कुरा जरुरी छ त्यो कुरामा हामीले जोड दिने हो । अहिलेसम्म चीनसँगको सम्बन्धमा कहिँ रिस्क छैन । चीनसँग जहिले रिस्क हुन्छ त्यो बेला रिक्स महसुस भयो भनौंला । अहिल्यै शंका गर्नु जरुरी छैन ।